कसरी गर्ने रक्तदान ? | Hamro Doctor News
रक्तदान कस्ता व्यक्तिले गर्ने ?
रक्तदातामा मलेरिया, कुनै प्रकारको यौनरोग, जन्डिस, चिनी रोग, एड्स, क्षयरोग लागेको हुनुहुँदैन। रक्तदान गर्दा रक्सी वा अन्य कुनै
गर्भवती, स्तनपान गराइरहेकी सुत्केरीको ६ महिनासम्म, महिनावरी भइरहेकाले पनि रक्तदान गर्नुहुँदैन। रक्तदान गर्ने बेलामा रक्तदाताको शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा १० प्रतिशतभन्दा कम हुनुहुँदैन। रक्सी सेवनको २४ घण्टाभित्र रक्तदान गर्नुहुँदैन।
रक्तदान गरेपछि के फाइदा हुन्छ ?
हामीले गरेको रक्तदान कुनै सङ्घरसंस्थाको लागि नभएर हाम्रो समाजमा मरणावस्थामा रहेका बिरामीहरूको लागि हो। हाम्रो शरीरको रगतको केही अंशले कुनै बिरामीले नयाँ जीवन प्राप्त गर्छ भने यो नै संसारको सबैभन्दा ठूलो धर्म र सेवा हो। त्यसैले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि र आत्मसन्तोष रक्तदान गर्नु हो।
राजाराम ढकाल स्वास्थ्यकर्मी हुन् र सिर्जनसिल हेल्थ केयर डाइग्नोस्टीक सेन्टर प्रा लिमा कार्यरत छन् ।
Last modified on 2020-08-06 07:38:37